စစ်မှန်သောနိူးထမူဟူသည်! | Real Revival! | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဇွန်လ၂၄ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင် ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ဟောဖူးသော အချက်ဟူမူကား၊ နောင်ကာလ၌ လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ ငါ၏ဝိညာဉ်ကို ငါသွန်းလောင်းမည်” (တမန်၂း၁၇)။
“နောင်ကာလ”ဟူ၍ ဤကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖေါ်ပြထားသောကာလသည်၊ ပင်တေဂုတ္တေပွဲနေ့မှ ခရစ်တော်ယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူမည့် ကျေးဇူးတော်ကြား ကာလကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ တမန်တော်၂း၁၇၌ “လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ ငါ၏ဝိညာဉ် တော်ကို ငါသွန်းလောင်းမည်” ဟူ၍ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကာလအတွက် ဂတိတော် မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဝမ်းနည်းစရာအလွန်ကောင်းသည်မှာ ဒဒသ်ဓ “၏”ဟူသော စကား လုံးကို ခေတ်သစ်သမ္မာကျမ်းစာတို့၌ ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြသည်။ ဗာနမငခညေ Sအညေိမေိ ဠနမျငသည ၌သာ ဂရိဘာသာစကား ဒဒစေသဓ ကို ဒဒသ်ယဓ ဟူ၍ Kငညါ Jamနျ ကျမ်းအတိုင်းဘာ သာပြန်ဆိုသည်ကို တွေ့ရသည်။ သိူ Kငညါ Jamနျ ကျမ်းစာတော်မြတ်က ပို၍ခေတ်သစ် ဘာသာပြန်ဆိုရာ၌ အလင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်! ပါမောက္ခဂျော့ခ်ျစမီတန်(၁၈၁၄-၁၈၈၉) ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတော်မြတ်အရ “ငါ၏ဝိညာဉ်” (စေသ) ကို လူမျိုးတ ကာတို့အပေါ်သို့ သွန်းလောင်းခြင်း(ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း)ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှန်ကို မကွယ်မ ပျောက်စေဖို့လိုပါသည်” (George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit, Banner of Truth, 1974 reprint, p.28).
ယောလ၂း၂၈၌ ဒဒသ်ဓ “၏”ဟူသော စကားလုံးသည် ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် ပရောဖတ်ပြုထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်၍ စဉ်ဆက်၍ ဖြစ်ခြင်းကို တမန်၂း၁၇၌ ကျွန်ုပ်တို့အားပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော် ၏တန်ခိုးတော်သည် “ကုန်ခန်းခြင်းမရှိ” မစလျှက်ရှိပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံကသာလျှင် တန်ခိုး တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်၄း၃၁ကို ဖတ်ကြည့်သော်၊ တမန်တော်တို့သည် (တဖန်ပြန်၍) ဝိညာဉ်တော်ပြည့်၀ခြင်းကို ခံစားရကြသည်။ “ထိုသူ အပေါင်းတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တရားတော်ကို ရဲ့ရင့်စွာဟောပြောကြ၏” ဟူ၍ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ပါမေက္ခစမီတန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဘောတရားလွဲမှားစရာ ပင်မလိုပါ၊ အခြေခံကျကျ၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ပင်တေဂုတ္တေပွဲနေ့တွင် ဆင်း ကြွလာပြီးဖြစ်၍၊ ယနေ့အသင်းတော်များ၊ ဘုရားသခင်ထံ ထိုဝိညာဉ်တော်ကို (သွန်းလောင်းဖို့) တောင်းခံဖို့မလိုတော့ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အချို့ သောအသင်းတော်တို့သည် သန်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိုတောင်းခံကြပြီး ၎င်းဝိညာဉ်တော်၏ တန်ဖိုးအားဖြင့် အားယူကြပြန်သည်” (ibid., p. 255).
ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးနှင့် ပြည့်၀ကြသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် လုပ်ဆောင်ချက် မတူညီကွဲပြားလျှက်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အိုင်အိန်းအိပ်ခ်ျမူရေ့ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ပင်တေဂုတ္တေပွဲနေ့ကစ၍ ဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံစံနှစ်မျိုးအားဖြင့် သာ မန်နှင့်အထူးသဖြင့် ထင်ရှားသည်ကို တွေ့ရပါသည်” (Iain H. Murray, Pentecost Today?, Banner of Truth, 1998, p.18).
သာမန်ဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချင်ဟူသည် အချိန်ကာလနှင့်အမျှ အသစ် သောအသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲလာရန် ပြုပြင်းခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်း “ထို့ကြောင့် ထာ၀ရဘုရားထံတော်မှ ချမ်းအေးသော အချိန်ကာလ”ကို ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့က “နိုးကြားခြင်း”ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ နိုးကြားရေးအတွက် ဆုတောင်းသောအခါတွင်၊ ဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် မြောက်များစွာသော ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ မိမိတို ၏အပြစ်အကျိုးအပြစ်ကို နားလည်ပြီး ယေရှုခရစ်ထံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤသည် “သမန်” ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်လုပ်တောင်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ အထူးဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဟူသည် ဓမ္မသီချင်းဟောင်းထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်။
ကောင်းကြီးမိုး၊ ကောင်းကြီးမိုး ကျွန်ုပ်လိုအပ်
(“ကောင်းကြီးမိုးသွန်းဖြိုး” ၁၈၄၀-၁၉၀၁ဒါနလ်၊ ဒဗလျူဝိုက်တယ်သီ ကုံးသည်)။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဆုတောင်းခြင်းတခုတည်းဖြင့် ဝိညာဉ်တော်၏နိုးကြား ခြင်း “ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ”ကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခံစားခြင်းမဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်အခိုင်အမာပြော လိုပါသည်။ ဒေါက်တာအေ.ဒဗလျူတိုဇာပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ဆုတောင်းခြင်းအား ဖြင့် ဝိညာဉ်နိုးကြားဖို့ ကြိုးစားရာတွင် ဆုတောင်းခြင်း ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်၊ မရှိသည်ကိုမှတ်သား ကြည့်ပါလား?
ကနေ့ခေတ်တွင် ဆုတောင်းခြင်းအရှိန်အဟုန်ဖြင့် တက်လျှက် ရှိသည်ဖြစ်၍ တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးတို့၌ ကောင်းကြီးမိုးရွာသွန်းဖြိုး နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးများက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုတောင်းခြင်းအဖြေမရရှိသည့်အတွက် ပို၍အဖြေရှာရန်နှိုးဆော်ပေးသည်။ (အေ.ဒဗလျူတိုဇာ.ဒီ.ဒီ. ''Prayer No Substitute for Obedience," in of God and Men, Christian Publication, 1960, pp. 50,51).
ဝိညာဉ်နိုးကြားရေးအဖို့ ဆုတောင်းခြင်းကို ရပ်တန်းသွားဖို့အကြံမပေးလိုပါ၊ အဟုတ်တကယ်ပါ၊သို့သော် ဆုတောင်းခြင်းတခုတည်းက နိုးကြားမှုမဖြစ်စေပါ! ကျွန်ုပ်၏မျက်စိဖြင့် မှတ်လောက်သားလောက်သော ဝိညာဉ်နိုးကြားမှုနှစ်ခုကို မြင် ယောင်မိသေး၏။ ဟိုအရင်က ဆုတောင်းခြင်းမရှိဘဲ၊ အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုစလုံး ရုတ်တ ရက်ဖြစ်လာခြင်းကို တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ ပထမ၊တရုတ်နှစ် ခြင်းအသင်းတော် နွေရာသီသမ္မာကျမ်းစာသင်တန်း၌ လူငယ်တစုတိုပသည် ရုတ်တရက် ဘုရားသခင်ထံမိမိတို့အပြစ်အ တွက်ငိုကြွေးအသနားခံတောင်းလျှေက်ခဲ့ကြသည်။ fကညိamနညအal Bစေအငျအ အသင်းတော်၊ ဗါဂျီးနီးယား၌လည်း အံ့အားသင့်စွာ ဘုရားသခင် သည် ဝိညာဉ်တော်ကို လူပေါင်း၇၀လောက်နှင့်သင်းအုပ်ဆရာအပါအဝင် လူအုပ်အပေါ် သို့ဝိညာဉ်တော်ကို သွန်းလောင်းသဖြင့် ငိုယိုကြပြီး အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိရန် အသနားခံ တောင်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ အသက်ကြီးသူတစ်ယောက်သည် အသံကုန်အော်ငိုပြီး “ကျွန်ုပ်အပြစ်သားပါ! ပျောက်ဆုံးလူသားပါ!” ဟူ၍အော်၍ ငိုကြွေးခဲ့သည်။ များစွာသော လူငယ်များသည် လူသွားသင်္ကြန်ပေါ်၌လာရောက်ပြီး သီဆိုချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ သီချင်းသီ ဆိုမချီးမွမ်းနိုင်သည့်တိုင်အောင် ငိုယိုပြီး အပြစ်ခွင့်လွတ်ဖို့တောင်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ နောက်သုံးလကြာသောအခါ လူပေါင်း၅၀၀ကျော် အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
အခြားသောအသင်းတော်f၌ တက်ရောက်နေစဉ်၌လည်း ဝိညာဉ်နှိုးထမှုတခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ကျမ်းစာသင်တန်းမတိုင်မှီ အပတ်ပေါင်းများစွာ ဆုတောင်းခဲ့ကြ သည်။ လူတို့နှင့်ဗိမာန်တော်သည်လည်း ပြည့်နှက်နေပါသည်။ သို့သော် ထိုသင်တန်းကို မကြာမှီတွင် ရုတ်သိမ်းလိုက်ရ၏။ အကြေားမှာ လူ၃ဦးနှင့်အခြားသောလူစုတို့သည် ဝိညာဉ်တော်တိုးထိသဖြင့် မိမိတို့၏အပြစ်အတွက်ငိုကြွေးအသနားခံတောင်းလျှောက်ခြင်း ကို သင်းအုပ်ဆရာထိတ်လန့်ကြောက်ရွှံ့နေ၍ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်၌ စည်းကမ်းမဲ့ဗရမ်း ဗတာဖြစ်နေပြီဟူ၍ ကြောက်လန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာ၌ လူသားတို့၏ ဂဏ္ဍအစိတ်အပိုင်းပါဝင်နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ “ဝိညာဉ်တော်၏အရှိန်ကို မငြိမ်းစေနှင့်”(၁သက်၅း၁၉)ဟူ၍ မိန့်တော် မူပါသည်။ သင်သည်လည်းနှစ်လကြာရှည်ဝိညာဉ်နိုးထမှုအတွက် ဆုတောင်းနေသော် လည်း သင်ကိုယ်တိုင် ဝိညာဉ်အရှိန်အဟုန်ကို ငြိမ်းစေပါလျှင်၊ ထိုသို့သင့်အပေါ်ဖြစ်လာ မည်မဟုတ်ပေ!။
ဝိညာဉ်နှိုးထမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကနဦးပုံစံအပြစ်အတွက် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်၏ ချီးမြောက်ခြင်းအကြောင်း ဟောကြားဖို့လို ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဟောကြားခြင်းမရှိရခြင်း၏ အကြေားကား “ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပင် ဆုတောင်းစေကာမူအဖြေမတွေ့ရပေ”ဟူ၍ စိတ်ပြငှါန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒဗလျူ.ပီနီ ကော်ဆန်သည် ထိုကဲ့သို့သော တရားဟောဆရာတဦးဖြစ်သည်။ ထိုဆရာသည် မြောက် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်တော်မီးနိုးထမှုကို မကြာမကြာ တွေ့ကြုံရသူဖြစ်သည်။ နီကော်ဆန်ပြောကြားရာတွင် “အသင်းတော်၌ ဝိညာဉ်နိုးကြား ခြင်းဖြစ်ပေါ်သောအခါ လူတို့သည် ရူးသွပ်သယာင်၊ မြူးထူးစွာဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ခံစား ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးသားထဲ အသိနိုးဆော်ခြင်းမရှိလျှင် အသင်းတော်တွင် လည်းအေးစက်သွားမည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးသား၌ စိုးရွှံ့ခြင်းမရှိဘဲ၊ အပြစ်သားတို့ လည်းထိုအတူ ကြောက်ရွှံ့စိတ်ရှိမည်မဟုတ်ပေ၊ အိုးလူသားတို့သည် မည်သည့်အချိန် တွင်မဆိုသေဆုံး နိုင်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် လူကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြည့်စေလျှက်၊ သာလွန်သောအသက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်” (Sermons by W. P. Nicholson: Tornado of the Pulpit, biographical sketch by Ian R. K. Paisley, Martyrs Memorial Productions, 1982, p. 41).
လောတ၏ဇနီးကိုအောက် မေ့သတိရကြပါ၊ သူသည်ခရစ် ယာန်မိ သားစုမှခရစ်တော်မပါရှိသော ငရဲသို့သွားသူဖြစ်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း လက်ရုံးတော်မှပျက်စီးခြင်း၏ ပွေ့ဖက်ခြင်းလက်ထဲ အရောက်သွားခဲ့ သည်။ သင်လည်း ခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ခရစ်တော်မပါသောငရဲထဲသွား ရောက်ကောင်းသွားရောက်နိုင်ပါသည်။
သင်သည်လည်း ယခုအသင်းတော်၌ပါဝင်စဉ် စစ်မှန်သောအသက် တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်၊ သင်သည်ငရဲသားနှစ်ကြိမ်ဖြစ်နေပေမည်။
ခရစ်တော်ပါဝင်ပါတ်သက်ခြင်းမရှိသော ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ အသက်ရှင်သောယေင်္ကျား၊ မိန်းမတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းတကြိမ်ထက်မ ကတည်ဆောက်ပါသော်လည်း(ခရစ်တော်မိန့်တော်မူရာတွင်)”ငါတို့သခင် သခင်ဟူ၍ ခေါ်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရ” ဟူ၍ မိန့်တော်မူ ပြီးဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်ပါဝင်ပါတ်သက်မှုမရှိသော လူတဦးသည် ယုံကြည်ခြင်း တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော် တကယ်စိတ်ချမှုမရှိနိုင်ပေ။ ကောင်း ကင်ဘုံသို့မဟုတ် ငရဲသွားရာလမ်းတွင် အလယ်လမ်းစဉ်ဟူ၍မရှိပါ။
သင့်ကိုမေးခွန်းမေးပါရစေ...သင်သည် ခရစ်တော်မပါသောခရစ်ယာန် ဖြစ်နေပါသလား?နာမည်ခံခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါသလား?သင်သည်ဘာသာရေးကျော့ကွင်းထဲ မိနေသော်လည်း ခရစ်ယာန်အသက်တာ ရင့်ကျက်မှုရှိနိုင်ပေး ခရစ်တော်ကိုဦးနှောက်အားဖြင့် သိနိုင်ပါသော်လည်း ကျွန်ုပ်အား “ကယ်တင်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်”ဟူ၍ သင်ပြော
နိုင်မည်မဟုတ်ပေ၊ သင့်ကိုသင်နှိမ့်ချပြီး၊ ဘုရားသခင်ကိုရိုသေစွာ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ပါ၊ သင့်ဂုဏ်မောက်မာမှုတို့ကို မေ့ပျောက်လိုက်ပါ၊အသင်းသား ခရစ်ယာန်အပြစ်မှစစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်အဖြစ်ပြုပြင်ပါ၊ သနားစရာ အပြစ်သားပမာ ခရစ်တာ်ထံချဉ်းကပ်ပါ။ (ibid, pp. 41-44).
ပင်တေဂုတ္တေပွဲနေ့၌ ရှင်ပေတရုဟောကြားခဲ့သည်မှာ “ထိုကြောင့် သင်တို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ကွပ်မျက်သောယေရှုကို ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အရာ၌၎င်း၊ အစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်း၊ ခန့်ထားတော်မူသည်” (တမန်၂း၃၆)ဟူ၍ ရှင်ပေတရုဟော ကြားခဲ့သည်။ ဟုတ်ပေသည် သင်တို့ကွပ်မျက်သူသည် ဘုရားဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ် အားလုံးကသူ့အား ကားတိုင်ပေါ်အသေခံစေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်အပြစ်သားဖြစ်၍ ငရဲသို့သွားရောက်မည့်သူဖြစ်သည်! သင့်အပြစ်ကယေရှုအားကားတိုင်ပေါ် အသေခံစေ သည်! သို့သော် သင်မူကားသတိပြုမိမည်မဟုတ်ပါ! သင့်ကိုသင်အဟုတ်ထင်ပျော်ရွှင် ပေနေအုံးမည်! သင့်ကိုသင် “ဘာသာရေးသမား”ဖြစ်၏ဟုဆိုမည်၊ သို့သော် “သနားစရာ ကောင်းသောအပြစ်သားပမာ ခရစ်တော်ထံမသွားလိုဖြစ်နေသည်!။
“ထိုသူတို့သည်ကြားလျှင် စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၍ ညီအကိုတို့၊အဘယ်သို့ပြု ရမည်နည်း? ပေတရုကလည်း သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်စေခြင်းငှါနောင် တရပါ” (တမန်၂း၃၇-၃၈)။
နောင်တရပါ! နောင်တရပါ! အသေဖြစ်နေသော ဘာသာရေးသမားမှ လှည့်ထွက်လာပါ သည်။ ငါခရစ်တော်ဖြစ်နေခြင်းကို ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ! သင်သည်လှည့်စားခြင်းခံရသော အယူလွဲများသောသူဖြစ်သည်! နီကောဆန်ပြောကြားသည်မှာ “သင့်ကိုသင်ခရစ်ယာန်ဟူ ၍ပြောနေမည်၊ အကယ်၍ ထိုသို့ထင်နေမည်ဆိုလျှင် မာန်နတ်အပေါင်းအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ငရဲသို့ကျရောက်ပေမည်” ဘုရားသခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်လိုက်ပါ၊ လူသားတို့၏ ထင် သည့်အတိုင်းမတွေးလိုက်ပါနှင့်! နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ လှမ်းလိုက်ပါ! ယေရှုမိန့်တော်မူ သည်ကား၊”အနိုင်အထက်ပြုသောသူတို့သည်လည်း လုယူဝင်စားရကြ၏” (မဿဲ၁၁း၁၂) ကောင်းကင်ဘုံသို့ အနိုင်အထက်ပြု၍လှမ်းလိုက်ပါ! ယေရှုသခင်ဆီလှမ်းလိုက်ပါ! ဘုရား ကျောင်းအသင်းသားဖြစ်ခြင်းကို မေ့ဖျောက်လိုက်ပါ! နောင်တရလျှက်ရှေ့သို့ “အနိုင်အ ထက်ပြု၍လှမ်းပါ” သင်ထင်သည့်အတိုင်း လှမ်းလျှောက်ခြင်းမပြုပါနှင့်! နောင်တရပါ! နောင်တရပါ! ယေရှုသခင်ထံငိုယိုပြီး အပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့အသနားခံလိုက်ပါ “ဒါဝိဒ်သား တော်ယေရှုကျွန်ုပ်အားသနားတော်မူပါ”ဟူ၍ ဟစ်အော်လိုက်ပါ (မာကု၁ဝး၄၇)။ သခင်ထံ အော်ဟစ်ငိုကြွေးလိုက်ပါ “ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ! ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ! ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ! ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ” ဟူ၍ငိုကြွေးလိုက်ပါ။
နောင်တရလျှက်၊ ယေရှု၏သနားခြင်းဂရုဏာတော်အထဲ၌ သင့်ကိုသင့်တိုးဝင်လိုက်ပါ! သည့်အပြင် အခြားမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ပါ! သင်နားလည်သဘောပေါက်ပါသလား?
ဒေါက်တာတိုစာပြောကြားသည်မှာ၊ “ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ခရစ်ယာန်နိုးထမူဖြစ်စဉ်ပင် ယနေ့အမေရိကန်နိူင်ငံအတွင်းစာရိတ္တပျက်ပြားမှု ဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့ရသည်။ ရာစုနှစ်တစ် ခုအတွင်းနိုးထမှုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့ရသည်။”ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းနိုးထမှုတိုးတက်လာခြင်း မတွေ့ရတော့ပေ” (ဒဒဩ Rနလငလal Wငအ့သကအ Rန်သမာအေငသညယဒဒ in Keys to the Deeper life, 1957, p.12).
အမေရိကန်နိုင်ငံအသင်းတော်များ၌ရှိ လူတို့အား သင်အကြိုက်မတွေ့နိုင်! လုံး၀ ကြိုက်မည်မဟုတ်! မြေကြီးပေါ်အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်စေသည်! ထိုသူတို့၏ အသေဖြစ် သောဘာသာရေးကို မလိုလားပါနှင့်! အဆက်ကိုကယ်တင်သော အသက်သခင်ကယ် တင်ရှင်ကိုသာလိုလားပါ! သင်သည်အပြစ်ဆေးကြောဖို့ စစ်မှန်သောအသွေးတော်လိုအပ် နေသည်။ စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်၌ အမှန်တကယ်ရှိနေသော အပြစ်ကိုဆေးကြောဖို့လိုသည်။ စစ်မှန်သောဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသမှသင့်ကို ကယ်တင်ဖို့ဖြစ်သည်! အော်ဟစ်ငိုကြွေးလိုက်ပါ “ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ!” ဟူ၍ ငိုကြွေးအော်ဟစ်လိုက်ပါ။ သင့်စိတ်နှလုံးသားအထဲက၊ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ ငိုကြွေးအော်ဟစ်ငိုကြွေးခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ခေတ်သစ်ဝိညာဉ်နိုးထမှုသမိုင်း မှတ်တိုင်စိုက် သူနိုင်ပေပြီ! ထိုသူတို့သည် ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ဖြင့် “ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ! ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ! ယေရှုကယ်မသနားတော်မူ ပါ! ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ!” ယေရှုခရစ်ထံတော်ပါးက ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာ ဂရု ဏာတော် ဆင်းသက်လာသည်တိုင်အောင် အော်ဟစ်ငိုကြွေး လိုက်ပါ!
ဤသီချင်းသံပြိုင်သံဆိုစဉ်၊ အနောက်ဘက်အခန်းဘက်သို့ သွားကြပါ၊ ဒေါက်တာ ကောကန်ဆုတောင်းဟစ်လိုက်ပါ “ယေရှုကယ်မသနားတော်မူပါ၊ မိမိ၏ဝိညာဉ်ရေးရာပြ သနာငြိမ်းအေးသွားသည့်တိုင်အောင် သခင့်ဆီငိုယိုအောဟစ်တောင်းလျှောက်လိုက်ပါ!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မာကု ၁ဝး၄၆-၅၂ကို ဖတ် ကြားပေးသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၂၅-၁၉၀၉ခုနှစ်၊ အလ် ဘတ်မတ်လင်း သီကုံးရေးသားသော “နိုးထစေမူပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကိုသီဆိုပေး သည်။